परंपरागत डिजाइन ठंडे बस्ते भारी अवस्थामा प्रयोग आर्थिक गतिविधिको विभिन्न क्षेत्रहरू एक विस्तृत प्रयोगको लागि अभिप्रेरित जो छ विशेष उपकरण को वर्ग हौं: खेल हल, सेवा, शिक्षा, खुद्रा प्रतिष्ठानबाट, उत्पादन र औद्योगिक आवेदन, आदि मा
धातु रैक जो कोहीले हाम्रो समय भण्डारण र वस्तु मान र उपकरण को एक विस्तृत विविधता को भण्डारणको लागि एक जटिल कार्य गर्न अनुमति दिन्छ। यस्तो डिजाइन प्रयोग गर्न र, कुनै पनि भण्डारण ठाउँ मा पूर्ण फिट यसको उपयोगी क्षेत्र विस्तार गर्ने धेरै सुविधाजनक छन्।
विभिन्न प्रकारका र सञ्चालन अवस्थाको एक विस्तृत श्रृंखला लागि डिजाइन रैक संरचना को प्रकार, र सामान्यतया तिनीहरू सबै आफ्नै कार्यक्षमता छ। धातु रैक खुद्रा, पुस्तकालय, अभिलेख, पैलेट विभाजित, र आफ्नो peculiarities छ छन्। यो निर्माण मा परिवर्तन को संभावना फर्नीचर को कुनै पनि अन्य तत्वको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। उपयुक्त उचाइ समतल र आफ्नो नम्बर, विधानसभा लाइन वा कंपित मा, विभिन्न गाइड। कल्पनाले, कुराहरू लागि एक स्थान, तपाईं को लागि स्वतन्त्रताको उडान!
आदेश, यो स्पष्ट उत्पादन को आवश्यक प्रकार परिभाषित गर्न महत्त्वपूर्ण छ; यसरी यो खातामा मात्र यसलाई भण्डारण छ के को उपस्थिति, तर पनि भण्डारण कक्ष, यसको मापदण्डहरू, साथै भण्डारण अवस्था लिन आवश्यक छ। कार्यात्मक कार्यहरू लागि उत्पादन को गलत विकल्प भएकोले भुइँमा लोड, एक शेल्फ वा खण्ड मा तपाईंको डिजाइन लोड र पतन सामना गर्न सक्दैन। हामी तपाईंलाई आफ्नो सुरक्षा को मामला मा शेल्फ को चयन लागि निम्न प्रक्रिया प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। सबै को पहिलो यो प्रश्न उद्देश्य समतल आवश्यकता के को लागि, जवाफ आवश्यक छ। तपाईं एउटा सानो ढुवानी क्षमता संग, साना डिजाइन आवश्यक भएमा, तिनीहरूले मात्र गर्दा वा एउटा सानो गोदाम लागि आवश्यक छन्, चयनको लागि मुख्य मापदण्ड आफ्नो मूल्य हुन सक्छ। तर यो वर्ग एक को एक ठूलो स्टक गर्न आउँछ भने, त्यसपछि रैक लोडर को प्रभाव बाट पनि अलिकति पतन विशाल घाटा सक्छ। तसर्थ, यहाँ आवश्यक मूल्यमा छैन ध्यान छ, र डिजाइन को सौन्दर्य र विश्वसनीयता र सुरक्षा, को विनिर्देशों निर्भर छन् जो।
समतल को safest, सबै भन्दा सुविधाजनक र व्यावहारिक भण्डारण लागि उपकरण हो। भण्डारण र अभिलेख ठंडे बस्ते भारी भार सामना गर्न सक्छन्।
किशोर बालिका लागि बंक बेड (फोटो)
छोराछोरी खुवाउने लागि मल-ट्रांसफर्मर (फोटो)
Rotavirus - के र कसरी व्यवहार गर्ने? रोकथाम
रूस को hallmarks। ठूलो रूस। रूस को मान्छे
मासु यसको आफ्नै व्यवसाय रूपमा प्रशोधन कारखाना
Erich Ludendorff: एक जर्मन सामान्य को जीवनी र क्यारियर